Gbasara Anyị - Liaocheng Xinrun Bubata na mbupụ Co., Ltd.
Kalama Hydraulic Jack
Stationlọ Ọrụ Hydraulic Power
Mgbapu breeki gwongworo
Kwadoro bụ 1998, Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. Emi odude ke Liaocheng Economic Development Mpaghara, Shandong Province, ọ na-ekpuchi ebe nke 68956 square mita na a na-ewu ebe nke 39860 square mita. Enwere ndị ọrụ 327, gụnyere ihe karịrị ndị ọkachamara 52 na ndị ọrụ nchịkwa. Ngụkọta akụ ahụ ruru yuan 83 na ọnụọgụ ahịa kwa afọ bụ nde USD 200.
Anyị haịdrọlik sịlịnda bụ tumadi maka Loader, n'iru Loader, eweli n'elu ikpo okwu, ahihia gwongworo, dump gwongworo, ụgbọala na-adọkpụ, ubi, na ọtụtụ na-ewu ụlọ igwe. Nwere ike ime ka ihe ị chọrọ na ịbịaru. Nabata OEM na ODM.
Companylọ ọrụ anyị bụ onye nrụpụta ọkachamara na onye na-ebupụ ahịa na-eche banyere imewe, mmepe na mmepụta telescopic na hydraulic cylinder. Anyị mma-onwem ụlọ ọrụ na magburu onwe ya mma akara niile nkebi nke mmepụta-enyere anyị aka-ekwe nkwa ngụkọta ahịa afọ ojuju.
Ngwaahịa anyị sitere na ugbo na ụgbọ ala na ụlọ ọrụ ọ bụla, a na-emepụta ngwaahịa ndị a iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ. A na-anabata OEM na ODM. E mepụtara akara mmepụta ihe n'ihi na anyị ghọtara mkpa ọ dị maka arụmọrụ ọkachamara na ogologo oge.
anyị bụ ndị isi na-eweta nke ụlọ automobil n'ichepụta ụlọ ọrụ dị ka China Zhongqi, Shanxi Zhongqi, FAW, Hongta, Chongqing Changan, wdg. Anyị Products na-exported na USA, Russia, Poland, Vietnam, Italy, Ukraine, Romania, Australia, Canada, South Korea, Malaysia na mba ndị ọzọ na mpaghara. ma na-anabata ebe niile maka ogo dị elu.na ntụkwasị obi. Companylọ ọrụ ahụ eguzobewo usoro ọrụ ndị ọrụ zuru oke, na-enye afọ ojuju na oge ire ere, ire ere na mgbe erechara ya. Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. ji ezi obi na-atụ anya isonyere aka gị, yana ọganiihu site na irite uru na otu mmepe!
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ọ bụla ma ọ bụ chọọ ị tụlee usoro omenala, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya na ị ga-enwe mmekọrịta azụmaahịa na ndị ahịa ọhụụ gburugburu ụwa n'ọdịnihu dị nso.
NO.30 Huanghe Road, Liaocheng Economic Development Mpaghara, Shandong, China